Sheekada filimka Bhaagamathie: Inaba caadi ma ahan Anushka Shetty filimkeeda bandhig ahaan iyo fariin ahaan – Filimside.net
Sheekada filimka Bhaagamathie: Inaba caadi ma ahan Anushka Shetty filimkeeda bandhig ahaan iyo fariin ahaan
January 28, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: January 28, 2018
Filimka Telugu ah Bhaagamathie waxaa hogaamiye ka ah atirishada awooda badan Anushka Shetty oo mashruuc cabsi badan la timid guusheedii Baahubali 2.
Jilaayaasha filimkaan: Anushka Shetty, Unni Mukundan, Jayaram, Usha Sarath, Vidyulekha Raman
Director: G Ashok
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 22-daqiiqo
Qiimeynta fariinta filimkaan: 3/5
Fariinta Filimka Bhaagamathie oo kooban: Chanchala (Anushka) waa gabbar waaxda canshuuraadka la shaqeyso waxayna is jecel yihiin garabna siiyo jaceylkeeda Unni Mukundan balse nasiib daro waa laga dilaa waxaana lagu nabaa inay kiiskan iyada ka dambeesay.
Kadib koox awood ku leh dowlada dhexe ayaa Chanchala (Anushka) u adeegsanayaan inay sir kasoo saarto wasiirka daacada ah Eeshwar Prasad (Jayaram).
Chanchala (Anushka) waxaa la geynaa qasriga qadiimiga ah ee lagu magacaabo Bhaagamathie si ay baaritaan u sameyso.
Laakiin Chanchala (Anushka) waxay cabsi iyo halis kala kulmeysaa gabadha aan la arkin Bhaagamathie ee ruuxaanta ah taasi oo aar gudasho dooneyso.
Hadaba qaybaha dambe filimkaan waxaa loo daawan doonaa waa kuma Bhaagamathie? sidoo kalena maxay dooneysaa in loo sameeyo ayadoo dhib hore sheeganeyso waxayna adeegsan doontaa Chanchala awood ahaan.
Bandhiga Jilaayaash: Anushka Shetty waxay la timid bandhig awood badan waxaana siweyn looga helay wajiyada kala duwan oo ay filimkaan shaashada kusoo bandhigeyso.
Jayaram isagana door muhiim ah ayuu ku leeyahay sidoo kalena dhamaan jilaayaasha kale ee doorarka caawiyaha ku matalayaan Asha Sharath, Murali Sharma iyo Unni Mukundan iyagana si heer sare ah ayay u mataleen.
Fariinta Filimkan Waxa Lag Yiri: Director Ashok sheeko xiiso badan ayuu isku daba riday asigoo jaceyl, qayaano, arimaha siyaada iyo waxyaabaha ruuxiyada cabsida badan hal meel isugu keenay.
Qaybta hore ama halka saac ee hore filimkaan waa heer sare mana laga xiisa dhigaayo halka qaybta dambe dhex dhexaad tahay dhamaadka si heer sare ah ayaa loo agaasimay waxaana si guud la dhihi karaa filimkaan waa mid aan daawashadiisa laga xiiso dhigeyn.
Gunaanad: Bhaagamathie waa filim Anushka Shetty si wacan kaga baxsay qaab jiliin ahaan sidoo kalena fariintiisa wacan tahay waxaana lagu sameeyay miisaaniyad xadidan taasi oo xaqiijin doonto in mashruucaan guul wacan gaari doono.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Bhaagamathie ee Anushka Shetty hogaamiye ka tahay:
Waxaa Aqrisay 791